Help my lock phone for iphone — MYSTERY ZILLION
Help my lock phone for iphone
August 2012 edited August 2012 in iPhone
iphone Model no: MC608LL
Version : 5.1.1 (9B206) ကို lock phone လို့ ပြောပါတယ်
အဲ့တာ ဆိုင်မှာမေးကြည့်တော့ official unlock လုပ်ဖို့ ၈၀၀၀၀ တောင်းတယ်
အဲ့တာ စျေးနည်းနည်းနဲ့ လုပ်လို့ အဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးများရှိလား
ဒါမှမဟုတ်လည်း အဆင်ပြေမဲ့ဆိုင်လေးများရှိရင် ညွန်ပေးပါဦး
iPhone တွေကို အခုအချိန်မှာ offical unlock လုပ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ခဲရာခဲဆစ်မဟုတ်တော့ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် update ဖြစ်တဲ့ software tool တွေ hardware tool တွေမရှိပဲနဲ့တော့ မလွယ်ပါဘူး ..
but services charges က ၈၀၀၀၀ ဆိုတော့ များတယ်ခင်ဗျ .. ကျွန်တော်ပဲ ဖတ်တာ သုည တစ်လုံးပိုဖတ်မိလို့လားမသိဘူး .. ၈၀၀၀ တော့လဲမဟုတ်နိုင်ဘူး .. လမ်းငါးဆယ် အပေါ်ဘလောက်မှာ first mobile ဆိုတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့ ရှိတယ်ဗျ ဈေးတော့ ဘယ်လောက်ကျမလဲမသိဘူး (ကြော်ငြာခြင်းလုံး၀ လုံး၀ မဟုတ်ပါ) အဲ့မှာ iPhone user တွေ အဆင်ပြေကြတယ် ကြားလို့ပါ။
p.s (၈၀၀၀၀ တောင်းတာ အဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့ ဘွာတေးဗျာ)
Lock iphone ကို ဘယ်တွေ လိုအပ်လဲ သိတဲ့ လူများရိႈရင် share ပေးကျပါ
If your Locked Phone Carrier is Korea KT, it will cost you 80,000Ks.
It can official unlock by XENOVIA At corner of SintOheTan Lan, WWW Tower,2nd floor.
Just guide for help.